Xinhua Myanmar - တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်းတွင် ရွှေတွင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက် ပိတ်မိနေသူများကို ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ
တရုတ်,	ကယ်ဆယ်ရေး ရွှေတွင်း
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ဆန်းတုန်းပြည်နယ် ချီရှားမြို့ရှိ ရွှေတွင်းတစ်ခု ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားသောနေရာ၌ ကယ်ဆယ်ရေးသမားများကို ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)	Environment, Disasters & Accidents
ပိတ်မိနေသူများအသက်ရှူနိုင်ရန် မြေအောက်အနက် မီတာ ၃၀၀ တွင် လေထုအရည်အသွေးကောင်းမွန်စေရေးအတွက် မိုင်းတွင်းမှ အဆိပ်ဓာတ်ငွေ့များကို အပြင်ထွက်နိုင်အောင် ထွက်ပေါက်ပေးရန် လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားရာနေရာရှိ ကယ်ဆယ်ရေးဌာန၏ အဆိုအရ သိရသည်။
ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက် ညနေ ၄ နာရီတွင် ကယ်ဆယ်ရေးပုံးတစ်ခု ကို ၁၈၀.၅ မီတာ အနက်သို့ ချပေးခဲ့သည်။ မီးသတ်သမားများသည် မြေအောက်အနက် ၃၇၀ မီတာသို့ အသံရှာဖွေစနစ်တစ်ခု ပို့ဆောင်ကာ အခြေအနေကို ဆက်တိုက်စောင့်ကြည့်လျက်ရှိသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ဆန်းတုန်းပြည်နယ် ချီရှားမြို့ရှိ ရွှေတွင်းတစ်ခု ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားသောနေရာ၌ ကယ်ဆယ်ရေးသမားများကို ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
အဆိုပါ မတော်တဆမှုသည် ဇန်နဝါရီ ၉ ရက် နံနက် ၁၀:၀၀ နာရီတွင် ချီရှားမြို့ရှိ ရွှေတွင်း၌ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ချီရှားမြို့ကိုစီမံအုပ်ချုပ်သည့် ယန်ထိုင်မြို့အစိုးရ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ပြောခဲ့သည်။ ဒေသခံအစိုးရသည် ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရက် ညနေပိုင်းအထိ မတော်တဆမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး မိုင်းတွင်းကုမ္ပဏီထံမှ သတင်းပို့မှုတစ်စုံတစ်ရာ မရရှိသေးဟု ဆိုသည်။
ပေါက်ကွဲမှုအတွင်း ဆက်သွယ်ရေးစနစ် ပျက်စီးခဲ့ခြင်းကြောင့် ကယ်ဆယ်ရေးသမားများအနေဖြင့် ပိတ်မိနေသော လုပ်သားများကို ဆက်သွယ်၍မရနိုင်သေးကြောင်း ပြောခွင့်ရသူက ပြောခဲ့သည်။
ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီတွင် အဆိုပါနေရာ၌ မြေတူးဖော်စက်များကဲ့သို့ စက်ယန္တရားကြီးများ တပ်ဆင်ခဲ့သည်။ မြေတူးဖော်ရေးပိုက်တစ်ခုမှာလည်း မြေအောက်အနက် မီတာ ၃၆၀ ကျော်အထိ ရောက်ရှိနေပြီး ကယ်ဆယ်ရေးသမားများသည်လည်း ပိတ်မိနေသောလုပ်သားများကို ကယ်ဆယ်ရန်နှင့် အပျက်အစီးများကို ဖယ်ရှားရှင်းလင်းရန် ရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ကြောင်း ယန်ထိုင်မြူနီစီပယ် အရေးပေါ် စီမံခန့်ခွဲမှုဗျူရို ညွှန်ကြားရေးမှူး Sun Shufu က ပြောကြားခဲ့သည်။
“မျှော်လင့်ချက်ရေးရေးလေးရှိနေသမျှ ကာလပတ်လုံး ကျွန်တော်တို့ လုပ်နိုင်တာအရာရာကို လုပ်ဆောင်သွားမယ်။ အရှုံးပေးမှာ မဟုတ်ဘူး” ဟု Sun က ဖြည့်စွက်ပြောခဲ့သည်။
အဆိုပါ ရွှေတွင်းကို ချီရှားမြို့ ဒေသခံကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သော Shandong Wucailong ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီ လီမိတက်မှ ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း သိရသည်။(Xinhua)
Update: Rescue underway after gold mine blast traps 22 in east China
The gold mine is owned by Shandong Wucailong Investment Co. Ltd.,alocal company in Qixia. ■
1- Rescuers are seen at the explosion site ofagold mine in Qixia City, east China's Shandong Province, Jan. 12, 2021. (Xinhua/Wang Kai)
2- Rescuers are seen at the explosion site ofagold mine in Qixia City, east China's Shandong Province, Jan. 12, 2021. (Xinhua)
Next Article မြစ်ကျဉ်းသုံးသွယ် ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံမှ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု ကမ္ဘာ့စံချိန်တင်